आज जेठ १६ गते राशिअनुसार प्रत्यकको भाग्यफल - Muldhar Post
आज जेठ १६ गते राशिअनुसार प्रत्यकको भाग्यफल
आजको राशिफल २०७६, १६ जेष्ठ बिहीबार 766 पटक हेरिएको
आज मिति २०७६ साल जेठ महिनाको १६ गते बिहिवार । अंग्रेजी पात्रोअनुसार २०१९ मे महिनाको ३० तारिख । मेष- यसले तपाईंहरू दुवैलाई आफ्नो बातचीत ऐच्छिक रूपमा र स्वतन्त्रतासँग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। बच्चाहरुले यो दिन धेरै कठिन दिन बनाउन सक्छन्। तिनीहरूको चासो राख्न स्नेहको हतियार प्रयोग गर्नुहोस् र कुनै पनि अनावश्यक तनाउबाट जोगिनुहोस्। प्रेमबाट प्रेम फल्छ भन्ने याद राख्नुहोस्। -आफ्नी पत्नीसँग पारिवारिक समस्या साझेदारी गर्नुहोस्। मायालु र एकअर्काको पोषण गर्ने दम्पतीको रूपमा आफूलाई पुन स्थापित गर्न र पुन: पत्ता लगाउन एकअर्काप्रति केही समय बिताउनुहोस्। तपाईंका छोराछोरीले पनि घरमा सुख र शान्ति सद्भावको तरङ्ग महसुस गर्न सकुन्। तपाईंका जोडीका परिवारका सदस्यहरूको रुकावटको कारण आजको दिन केही कष्टपूर्ण हुन सक्छ। आफ्ना सहकर्मीहरूले तपाईंले सँधैं भन्दा आज राम्रो गरि बुझ्नेछन्। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
वृष-आज तपाईंले वैवाहिक जीवनको परमानन्द स्वीकार गर्ने प्रशस्त अवसर पाउनु हुनेछ। प्रेमबाट प्रेम फल्छ भन्ने याद राख्नुहोस्। तपाईंका जोडीका परिवारका सदस्यहरूको रुकावटको कारण आजको दिन केही कष्टपूर्ण हुन सक्छ। आफ्ना सहकर्मीहरूले तपाईंले सँधैं भन्दा आज राम्रो गरि बुझ्नेछन्। कुनै रोचक कुरा पढेर केही मानसिक व्यायाम गर्नुहोस्। विगतका लगानीबाट आयमा वृद्धि हुने देखिन्छ। आमाबाबु र मित्रले तपाईंलाई खुसी राख्न आफुले सकेसम्म गर्नेछन्। रोमान्सका लागि राम्रो दिन। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन।
मिथुन-आफ्नी पत्नीको उपलब्धि प्रशंसा गर्नुहोस् र उनको सफलता र सौभाग्यमा आनन्दित हुनुहोस्। आफ्नो कृतज्ञतामा उदार र निष्कपट हुनुहोस्। तपाईं आफ्नो समूह भित्र घुम्नुभयो भने विशेष कसैको आँखा फेला पार्नु हुनेछ। तपाईंको आज सबै काममा राम्रो हात पर्न सक्छ। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। डरको डरलाग्दो राक्षससँग लड्न आफ्नो विचारमा केही सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं यो कट्टर भूतको निष्क्रिय र बेरहमी सिकार बन्नुहुनेछ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
कर्कट-बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ – त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको साथीहरूले तपाईंको उदार व्यवहारको फाइदा नलिउन। घरको तनाउले तपाईं क्रोधित बनाउन सक्छ। तिनीहरूलाई दबाउनाले मात्र शारीरिक समस्या बढाउँछ। शारीरिक गतिविधिले यसलाई हटाउनुहोस्। रिसाले अवस्था छोड्नु राम्रो हुनेछ। यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन थोरै प्रेम र दया दिनुहोस्। तपाईंको हावी मनोवृत्तिले आफ्ना सहकर्मीबाट आलोचना हुनेछ। नयाँ विचारहरूलाई जाँच्ने सही समय। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ।
शिंह आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ।-आज तपाईं तनाउमुक्त महसुस गर्नुहुनेछ र रमाइलो गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ – तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। दिवास्वप्नले तपाईंको पतन हुनेछ – आफ्नो काम गर्न अरूलाई नभन्नुहोस्। तपाईं निष्कर्षको लागि हतारिनु भयो र अनावश्यक कार्यहरू गर्नुभयो भने यो एउटा दुखपूर्ण दिन हुनेछ। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ।
कन्या -जीवनको राम्रो र नराम्रो कुराहरू बाँट्न तिनीहरूसँग घनिष्ठ सहयोगमा काम गर्नुहोस्। तपाईंको परिवर्तित मनोवृत्तिले तिनीहरूलाई असीमित आनन्द दिनेछ। सेक्सको इच्छित परिणाम पाउनु हुनेछ। कामको सन्दर्भमा आजको दिन धेरै राम्रो देखिन्छ। आजको दिन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा अरूलाई बुझाउन उत्सुक नहुनुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।कठिनाइ बुन्ने र तिनीहरूलाई बढाउने तपाईंको बानीले तपाईंको नैतिक फाइबर कमजोर हुन सक्छ। त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन – यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ। परिवारमा तपाईंको हावी मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न सही समय हो।
तुला-कामको दबावले आज केही तनाउ ल्याउन सक्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ। तपाईंले प्रेमको पीडा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि साझेदारी गर्नु अघि आफ्नो भित्री भावनालाई ध्यान दिनुहोस्। केही मनोरञ्जनका लागि राम्रो दिन। तपाईंको जोडी अरूको प्रतिकूल प्रभावमा फँस्न सक्छ र तपाईंसँग झगडा गर्नेछ, तर तपाईंको प्रेम र दयाले सबैलाई मिलाउनेछ।
वृश्चिक-अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् किनकि यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। परिवारको दायित्वलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंले लापरवाही गर्नुभयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। संलग्न भएकाहरूले आफ्नी भावि पत्नीमा ठूलो आनन्द पाउनेछन्। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंको जोडीले थाहै नपाई साँच्चै शानदार केही कुरा गर्नेछन् जुन अविस्मरणीय हुनेछ।
धनु-आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। तपाईंले प्रियजनहरूसँग तर्क हुन सक्ने विवादास्पद मुद्दाहरू ननिकाल्नुहोस्। प्रेम इन्द्रियहरूले पाउन सक्ने कुरा होइन, तर तपाईंका इन्द्रियहरूलाई आज प्रेमका परमानन्दको अनुभव हुनेछ। तपाईंका साझेदारहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार काम गरेनन् भने आहत हुनु आवश्यक छैन – तपाईंले तिनीहरूसँग त्यस विषयमा राम्रोसँग कुरा गर्नु आवश्यक छ। यात्रा सुखद र अत्यधिक लाभदायक हुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कुरा आउँदा सबै साँच्चै शानदार देखिन्छन्।
मकर- स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। तपाईंको आकर्षक प्रकृति र सुखद व्यक्तित्वले तपाईंलाई नयाँ मित्र बनाउन र सम्पर्क सुधार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। प्रेम र रोमान्सले तपाईंलाई आनन्दित मुडमा राख्ने थिए। मालिकको राम्रो मुडले काममा सम्पूर्ण वातावरण कर्ममय बनाउन सक्छ। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। आफ्नो साथीमा शङ्का गरेकोले ठूलो लडाई हुन सक्छ।
कुंभ-आफैलाई सुहाउँदो र राम्रो राख्न बढी क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस्। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। परिवारको गोप्य समाचारले तपाईंलाई आश्चर्य बनाउन सक्छ। आज एकोहोरो माया विनाशकारी साबित हुनेछ। आफ्ना सहकर्मीहरूले तपाईंले सँधैं भन्दा आज राम्रो गरि बुझ्नेछन्। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। कुनै आफन्त, मित्र वा छिमेकीले आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा खिचलो ल्याउन सक्छ।
मीन-आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। आफ्ना छोराछोरीलाई तपाईंको उदार व्यवहारको फाइदा लिन नदिनुहोस्। आज प्रेम नभएको महसुस हुन सक्छ। आज तपाईंलाई गलत साबित गर्न मन पराउने एउटा लुकेको शत्रु हुनेछ। आज तपाईं एउटा तारा झै व्यवहार गर्नुहोस् – तर केवल प्रशंसनीय कुरा गर्नुहोस्। कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्।
जीवन जिउने कला ।
जीवन जिउने सवैको आ आफ्नै तरिका हुन्छ, कतिपयले जिन्दगीलाई हर्ष उल्लासका साथ बिताइदिन्छ्न भने कोहि जिन्दगिभरी रोइरहन्छन । सबैको आफ्नो आफ्नो चाहाना हुन्छ, जीवन यस्तो होस भन्ने कामना हुन्छ, मान्छे आफ्नो जिन्दगीमा दु:खद समय कहिलेपनी नआओस भनेर कामना गरिरहन्छ, त्यसैको लागि कति मेहनत गर्छ, पैसा कमाँउछ । साथिभाई इस्टमित्र तथा अन्य असल मान्छेको संगत गर्छ । त्यतिले मात्र नपुगेर विभिन्न मठ मन्दिरमा धाउनुको साथै पुजा अर्चना,दान, भेटी, नैबेद, तथा विभिन्न पशुपन्क्षीको बलि चढाउने समेत गरिरहेको हुन्छ यो सबै आफ्नो सुखको लागि हो आत्म सन्तुष्टिको लागि हो । तर के मानिसले बास्तवमै यी माथी उल्लेखित कार्यहरु गरेर सुख प्राप्ति गरिरहेको छ त ? के दु:ख मेटिएको छ त ? के मन शान्ती भएको छ त ? अहँ पटक्कै छैन । जति गरेपनि मानिसले खुसी भेट्नै सकेको छैन । उसो भए खुसि कसरी हुने त अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहि हुन आँउछ, खुसी हुनलाई के गर्नु पर्छ, कस्ता कुराले मान्छेलाई दिगो खुसी मिल्छ यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी हुन्छ ।एउटा सानो बालकलाई बाबू खुसी कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने उसले के जवाफ देला ? पक्कै पनि मनमा भनेर जवाफ दिन्छ । अनि दु:ख कहाँ हुन्छ भनेर सोध्नुस उसको जवाफ फेरि पनि मनमा भन्नेनै हुन्छ । हो वास्तवमै खुसी र दुख भन्ने कुरा मान्छेको मनमा हुने हो । शरीरका अन्य अंग चोटले दुख्छन, तर मन चोटले दुखित हुन्छ । सबभन्दा पहिला दुख्नु र दु:ख फरक कुरा भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यस्तै सुख वा खुसि शरिरका अरु अंगले अनुभूति गर्न पाँउदैनन त्यसको सम्पुर्ण अधिकार मनमा निहित हुन्छ ।
मनलाई सन्तुलनमा राख्न सके मात्र दु:ख घटाउन सकिन्छ अन्यथा जति मठमन्दिर धाए पनि त्यो सिसिफस हुन जान्छ । त्यसकारण मन संतुलित गर्न सक्नुनै सबैभन्दा ठूलो खुसी हुने कारण हुन सक्छ ।मानिस कसरी खुसी हुन सक्छ भनेर विभिन्न विद्वानले विभिन्न थरी किताब लेखेका छन । पत्रपत्रिकामा हरेक दिन जसो खुसी हुने तरिकाहरु भनेर लेख रचना प्रकाशित भइरहेका हुन्छन । त्यस्तै केहि योग गुरुहरु निरन्तरको योग अभ्यासले मानिसलाई दिगो सुख दिन्छ भन्ने अभिमत राख्छन । केही योग गुरुहरुको तर्क निरन्तरको ध्यानले खुसी मिल्छ भन्नेमा छ । साधना, सेवा र सत्संगमा सबैभन्दा सुख छ भन्ने गुरुहरु पनि भेटिन्छन । महा मानव गौतम बुद्धले पनि ध्यान र सेवाबाट सुख प्राप्त गर्न सकिने कुरा औल्याएका छन । बास्तवमा सुख के मा छ् त भन्दा सुख यिनै विद्वानहरुले भनेको जस्तै निरन्तर स्वाध्यान(पढेको कुरा ब्यबहारमा लागू गर्नु) निरन्तर योग, निरन्तर ध्यान, निरन्तर कर्म, निरन्तर सेवा र निरन्तर सत्संग यति कुरामानै छ । यति कुरा बाहेक अन्त कतै जानै पर्दैन खुसी खोज्न । यसमा दत्तचित्त हुन सकेमा कसैले पनि दुखित हुनु पर्दैन ।यहाँ आज हामी जीवन जिउने कलाको बारेमा चर्चा गर्छौ ।
कसरी खुसी हुन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं । योगगुरु रामदेवले योगाको माध्यमबाट आज संसार भरी सुख फैलाउँन सफल भएका छन । देख्नेले रामदेवको योगा कलालाई ब्यापार देख्लान तर जो उनको योगा विधि सिकेर आफुलाई परिवर्तन गरि सुख हात पार्न सफल भएका छन तिनिहरुको लागि रामदेव भवगान समान छन । त्यस्तै श्री श्री रविशंकरले आफ्नो ध्यानकलालाई आर्ट अफ लिभिङ भन्दै आज बिश्वका १५६ देशमा फैलाउन सफल भएका छन । तिनै रविशंकरले खुसि हुन के गर्न सकिन्छ अर्थात जीवन जिउने कलाभित्र के के कुरा पर्दछ भनेर आफ्ना बिचार ब्यक्त गरेका छन । उनले जीवन जिउने कलामा जम्मा पाँच वटा कुरा रहने उल्लेख्य गरेका छन । ती पाँच वटा कुरा बिचार गर्न सकेमा मान्छेको जिवनमा सधैं खुसी हात लाग्ने उनको अभिमत रहेको छ । तिनी गुरु श्री श्री रविशंकरले उल्लेख गरेका पाँच कुराहरु यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
श्री श्री रविशंकरका अनुसार जिन्दगीमा सुख आउँछ दु:ख आउँछ यो निरन्तर चलिरहन्छ यसको कुनै अत्यको सिमा छैन यस्तो परिस्थितिमा मनलाई समाल्न सक्नुनै जीवन जिउने कलाको पहिलो कुरा हो । सधैँ सुख मात्र हुन्न अनि सँधै दुख मात्र पनि हुन्न यी त केवल केहिछिनका पाउना हुन आउने र जाने निरन्तर चल्ने प्रक्रिया । बिरोधात्मक परिस्थिति आइरहन्छन् कहिले सुख कहिले दुख, कहिले हाँसो कहिले रोदन, कहिले धन कहिले ऋण, कहिले सफलता कहिले असफलता अनि कहिले माथी कहिले तल । यस्तो अवस्थामा मनलाई आफै भित्र टुट्न नदिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कला हुन आउँछ । यदि खराब परिस्थितिबाट मननै टुट्यो भने त्यस भन्दा अगाडी सबै अन्धकार देखिन्छ, जीवन मार्ग झन कठिन बनिदिन्छ । त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि आफ्नो मनलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु पर्यो । मन समाल्न सक्नुनै जीवन जिउने कलाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
जीवन जिउने कलाको दोश्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जो ब्यक्ति जस्तो छ उसलाई उस्तै स्विकार गरौं । हामी सोच्छौं कि हरेक ब्यक्ती म जस्तै होस तर यो संभव छ र ? विश्वमा करिव सात अर्ब भन्दा बढि मानिस छन यी हरेक मानिशको बानी बेहोरा अर्को मानिस संग मिल्दैन । सबैको आ आफ्नै तरिका हुन्छ । सासू आमा चाहानु हुन्छ बुहारी म जस्तै होस, बुबा चाहानु हुन्छ छोरा म जस्तै होस, साथीभाइ चाहान्छन साथी आफू जस्तै होस तर यो संभव कुरा होइन यदि संभव गराउन खोजियो भने त्यहाँ संघर्स सुरु हुन्छ परिस्थिति झन खराव हुन पुग्छ । त्यसकारण सबैलाई अघि बढ्नको लागि समय दिउ कसैलाई नरोकौं उनिहरु आफ्नै गतिले अगाडि बढ्दै जान्छन । मात्र हामी स्विकार्दै जाँउ । यसरी जो जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नुनै जीवन जिउने कलाको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
जीवन जिउने कलाको तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अरुले आफ्नो बारेमा के सोचिरहेका छ्न भनेर कहिले पनि चिन्ता नगर्नुस । दुनियाँमा सबैको आ आफ्नै सोच हुन्छ र सोच्ने अलग अलग ढंग हुन्छ । त्यो मान्छेले मलाई यसो भन्यो भनेर चिन्ताग्रस्त हुनु बेकार छ । उसले तपाईंलाई खराब भन्छ भने उ खराब छ किनकि तपाईंलाई थाहा छ तपाईं कति असल हुनुन्छ भनेर । त्यसकारण अरुले आफ्नो बारेमा नराम्रो भन्यो भनेर दुखी हुनु बेकारको कुरा सिबाय अरु केही हैन । जे जे भन्छन भन्न दिनुस चिन्ता नगर्नुस । आफ्नो मनलाई अरुको फुटबल नबनाउनुस । समय बर्बाद नपार्नुस ।
जब हामी बाट भुल हुन्छ नि यसबेला हामी भुल भयो के गरौं भनेर अपशोच गर्छौं तर त्यै भुल अरुले गरेमा उसले जानी जानी त्यो भुल गरेको भन्ठाँन्छौ र हामी रिसाँउछौं, आफुले गर्दा चाहिँ भुल अरुले गर्दा चाहिँ हेलचेक्राइ देख्ने बानी हटाउनु जीवन जिउने कलाको चौथो महत्वपूर्ण कुरा हो । अरुको भुलमा क्षमा दिनुनै सबैभन्दा ठूलो कुरा यो । यो नसोच्नुस कि माफ माग्न आउँछ अनि माँफी दिँउला, यस्तो पटक्कै हैन उ माफी माग्न आओस या नआओस उसलाई माफ दिनुस मन हल्का हुन्छ । अरुको गल्तिको कारण खोजेर बेकारमा मन भारी बनाएर बस्नु आफैमाथी तनाव थप्नु बाहेक अरु केही हैन । त्यसकारण क्षमादान दिने कुरा निकै महत्वपुर्ण छ । अरुको गल्तिमा क्षमा दिने बानिको बिकास गरौं हैन भने त्यही ब्यक्ति तपाईंको मस्तिष्कमा बस्नेछ र रातदिन तपाईंको दिमाग चाटिरहनेछ बरु समयमै माफ दिएर उसलाई मनबाट हटाएर दिमाग खाली गराउनुहोस ।
जीवन जिउने कलाको पाँचौ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वर्तमानमा जिउनु हो । बितेको समय र भोलि के होला भनेर चिन्तित हुनु मुर्खता सिबाय अरु केही हैन । त्यसकारण अहिले भर्खरै जे छ त्यसमा रमाउन सिक्नु पर्छ । बितेको समयलाई पोष्टमार्टम गरेर बस्नुको कुनै उपलब्धि छैन । अनुसन्धानका अनुसार करिब ७०-८०% मानिशहरु बितेको समयलाई लिएर त्यसको बारेमा अनुसन्धान गरेर बस्छन । यस्तो किन भयो ? कसरी भयो ? कसले गर्यो ? इत्यादि सोच्दा सोच्दै समय र पैसाको लगानी चुर्लुम्म भएको मेसो पाँउदैनन त्यसकारण यि सबै फोकट छ्न । बितेको समयलाई छानबिन गरेर बर्तमानलाई खल्लो नबनाउनुस । बिगतलाई बिर्सिने कोसिस गर्नुस । बर्तमानमा रमाउनुस । हिजो सम्झेर पछुताउनु या फेरि दुखित हुनुमा केही उपलब्धि छैन । बितेको समयबाट त पाठ सिक्ने हो अब त्यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण गर्ने हो ।
यसरी श्री श्री रविशंकरले जीवन जिउने कलालाई पाँच कुरामा समेटेका छ्न । के यी सबै कुरा ब्यबहारमा लागू गर्न संभव छ त भन्ने प्रश्नमा रविशंकर भन्छ्न संभव छ तर त्यसको लागि निरन्तर प्राणयम, सुदर्शन क्रीया, सहज समाधी, ध्यान र योगको जरुरत हुन्छ । त्यस्तै ध्यान, सेवा र सत्संगले यी सबै कुरालाई संभव बनाउने रविशंकरको जिकिर छ ।त्यसैले हामी सबैले खुसि खोज्ने हो भने हाम्रो चन्चल मनलाई स्थिर राख्न सक्नु पर्दछ । मननै खुसी र दुखको कारण हो भन्ने थाहा पाइसकेपछी अब किन बिलम्ब गर्नु । त्यस्तै खुसी हुने अन्य कुराहरुपनी हुन सक्छन् जस्तै आत्मा सम्मान हुने किसिमको काम, असल पारिवारिक सम्बन्ध, नियमित यात्रा तथा भ्रमण, साथी भाइ जमघट, चलचित्र तथा किताब बाट हुने मनोरंजन आदि । यी साना साना कुराले पनि खुसीहरु जोड्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने गरेको हुन्छ । खुसी हरु जोडिएर नै सुख हुने भएकाले माथि उल्लेखित कुरालाई पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ तर दिगो खुसी र दिव्य सुख मिल्ने उपाय भनेको ध्यान, सेवा र सत्संग नै हो ।